Raw Alpha GPC ntụ ntụ (28319-77-9) Ndị na-emepụta ya - Phcoker Chemical
alpha-GPC (L-Alpha glycerylphosphorylcholine, choline alfoscerate) bu ihe eke
Alpha GPC (Choline Alfoscerate) ntụ ntụ (28319-77-9) video
L-Alpha glycerylphosphorylcholine (alpha-GPC, choline alfoscerate) bụ ihe na-emepụta ihe na-emepụta ụbụrụ na ụbụrụ. Ọ bụkwa ihe a na-akpọ parasympathomimetic acetylcholine nke nwere ike nwee ike ịgwọ ọrịa Alzheimer na ọrịa ndị ọzọ.
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) ntụ ntụ na-enyefe choline na ụbụrụ ngwa ngwa n'ihe mgbochi ọbara na ụbụrụ biosynthetic precursor nke acetylcholine. Ọ bụ ọgwụ na-enweghị ọgwụ na ọtụtụ mba.
Na mkpụrụedemede alpha-GPC na Europe bụ ọgwụ ọgwụ ọgwụ maka ọgwụgwọ ọrịa Alzheimer. Na United States alpha-GPC bụ naanị dị ka mgbakwunye nri, ọtụtụ n'ime ngwaahịa na-akwalite iji melite ebe nchekwa. Ihe ọzọ maka alpha-GPC gunyere ọgwụgwọ dịgasị iche iche dementia, stroke, na "obere stroke" ).
Alpha GPC (Choline Alfoscerate) ntụ ntụ (28319-77-9) Smmezi
Product Name Alpha GPC (Choline Alfoscerate) ntụ ntụ
Chemical Aha Choline Alfoscerate; Alpha GPC; L-Alpha glycerylphosphorylcholine; Choline glycerophosphate
Klaasị ọgwụ ọjọọ parasympathomimetic acetylcholine
molekụla Fnhazi C8H20NO6P
molekụla Wasatọ 257.223 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 257.103 g / mol
Mgbu Point 142.5 ° C
Na-egbuke egbuke Point Ọ dịghị ụbọchị dị
Ọkara Ndụ nke Ndụ Mkpụrụ ndụ Alfa GPC nke dị ndụ na gburugburu 4-6 awa mana a na-ekwu ọnụ ọgụgụ kacha elu n'ime oge 1-2 nke ingestion
Agba Azu uzuzu
Sịkwa akwa Tigwe 0 - 4 Celsius C maka obere oge (ụbọchị ruo izu), ma ọ bụ -20 Celsius C maka ogologo oge (ọnwa).
Antinye A na-eji Choline Alfoscerate agwọ ọrịa Ọrịa Alzheimer na nsogbu ndị ọzọ.
Alpha GPC (Choline Alfoscerate) ntụ ntụ (28319-77-9) Nkọwa
Alpha GPC bụ aha a na-akpọkarị L-Alpha glycerylphosphorylcholine, nootropic cholinergic nke na-eme n'ụzọ nkịtị mana enwere ike iwere dị ka mgbakwunye. A na-amata ntụ ntụ nke Alpha GPC maka ngwa ngwa ma nwee ntụkwasị obi na-enyefe ụbụrụ na ụbụrụ maka okike nke cognition-boosting neurotransmitter acetylcholine.
O nwere uru bara uru maka ụbụrụ na ahụ nakwa na ọ nwere ike ime ka ọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ, na-akwalite ahụike nke ahụike, ma nyere aka na-echekwa ihe dị mkpa n'ụbụrụ.
Alpha-GPC na-anapụta ụbụrụ na ụbụrụ na-emetụta ụbụrụ ọbara na ụbụrụ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ acetylcholine. Ọ bụ ọgwụ na-abụghị ọgwụ na ọtụtụ mba. FDA kpebiri na ihe karịrị 196.2 mg / onye / ụbọchị a na-ewere GRAS. N'ebe ụfọdụ mba Europe, a na-achịkwa ya dị ka ọgwụ ọgwụ na-ede ọgwụ ma jiri maka ọgwụgwọ ọrịa Alzheimer.
Alpha GPC (Choline Alfoscerate) ntụ ntụ (28319-77-9) Uzo nke Omume?
Alpha-GPC na-akwado usoro nsogbu ahụ dum site n'ịkwalite acetylcholine na cholinergic ọrụ. O nwekwara ike ibudata ọkwa ndị ọzọ na-echebe ụbụrụ dị ka:
Ọzọ, dị ka a kpọtụrụ aha, ọ nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ homone too.
uru nke Alpha Alpha GPC (Choline Alfoscerate) ntụ ntụ (28319-77-9)
Mmelite Ka Mma na Kaawanye Mma
Naghị arụ ọrụ egwuregwu, ike na-arịwanye elu na mgbake ọsọ ọsọ
Ka Mma Ka Mma
Nwere ike igbochi mgbasa ozi
Na-atụ aro Alpha GPC (Choline Alfoscerate) ntụ ntụ (28319-77-9) Ọnụọgụ ọgwụ
Alpha GPC bụ banyere 40% choline site na ibu. Ya mere, 1,000 mg nke Alpha GPC ntụ ntụ na-enye ihe dịka 400 mg nke choline.
Alpha GPC na-atụ aro ụbụrụ maka uru ntụgharị uche bụ 250-1,200 mg kwa ụbọchị. Nke a bụ mmebi nke usoro nhazi usoro:
Ọrịa Alzheimer na nkwarụ: 400 mg, 3X kwa ụbọchị n'ihi 6 - ọnwa 12.
Mgbagha mgbake: 1,000 mg kwa ụbọchị maka ọnwa 1 (dika injections).
400 mg ọnụ, 3X kwa ụbọchị maka ọnwa 5 mgbe e mesịrị
Egwuregwu egwuregwu: 250 mg kwa ụbọchị maka izu 1 
600 mg kwa ụbọchị maka 1 - 6 ụbọchị.
Anya igwe: 400 mg, 2X kwa ụbọchị maka ọnwa 2.
Dika ihe akaebe nke anecdotal, dose nke ihe nootropic sitere na 400 ruo 1,200 mg / day. Ị nwere ike ịmalite na njedebe ala ma soro nzaghachi gị.
mmetụta nke Alpha Alpha GPC (Choline Alfoscerate) ntụ ntụ (28319-77-9)
Alpha-GPC ntụ ntụ dị mma na ọnwụnwa niile. N'akụkụ ole na ole nke ndị ọrịa, ọ kpatara mmetụta dị nro dịka:
Na nkuzi nchekwa na nkịta na oke, megadoses (ruo 3,000 mg / kg) na-ebelata obere ọrụ ụmụ anụmanụ. Ndị nchọpụta kwubiri na ogologo oge (26 izu) iji mkpụrụ 150 mg / kg (10 g kwa ụbọchị maka ndị okenye) na-enweghi ihe ize ndụ ahụ ike.
N'ihi enweghị nchekwa data, ụmụ na ndị ime ime nwere ike ịchọ izere alpha-GPC.